Top 5 Ọnọdụ ụgbọ oloko kachasị njem na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Ọnọdụ ụgbọ oloko kachasị njem na Europe
Njem ụgbọ oloko bụ ụzọ kachasị ejegharị ejegharị na Europe. Ya mere, offọdụ n'ime ụgbọ oloko kacha dị ụgbọ ala n'ụwa niile na Europe na oge ụfọdụ, n'ụwa.
N’agbanyeghi na igwe mmadu juru n’oge, elu 5 Ezubere ọdụ ụgbọ oloko kachasị dị na Europe iji nye ihe ọ bụla ịchọrọ na njem gị.
Soro njem anyị na Europe wee chọpụta ụgbọ ọdụ ụgbọ ala kacha dị na Europe. Are na - achọ ịchọpụta ebe ị nwere ike ige Vivaldi ntị ma n'ọdụ ụgbọ oloko ị ga - echere n'akụkụ osimiri gị maka ọpụpụ ụgbọ oloko gị na Italytali.
1. Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Gare Du Nord, Paris
Gare du Nord na Paris (Mkpirisi okwu pụtara French bụ ọdụ ụgbọ oloko, Nord na French bụ North) bụ ọdụ ụgbọ oloko kacha ibu na Europe. Enwere nso 700,000 Ndị njem na-agafe n’ọdụ ụgbọ oloko kwa ụbọchị. Gbọ ọdụ ụgbọ oloko dị nso na 10nke arrondissement na North nke Paris, yabụ ọtụtụ n'ime ndị njem ahụ bụ ndị Parisi. naanị 3% nke ndị njem ụgbọ njem ahụ bụ ndị njem na-esi na ma ọ bụ na-abịa UK abịa Eurostar ụgbọ okporo.
E wuru ọdụ ụgbọ oloko kacha dị na Europe 3 afọ, n'etiti 1861 na 1864. Onye wuru ulo 9 ihe akuko di egwu di egwu 23 ihe akpụrụ akpụ siri ike n'okporo ọdụ ahụ. Ihe oyiyi a na-anọchi anya isi obodo Europe ndị ụgbọ oloko na-ejikọ na Paris.
Ọ gbasaawanye ọdụ ụgbọ oloko ahụ ugboro abụọ n'afọ ka a na-atụ anya ịgbasawanye ọzọ n'ihi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị njem na ụzọ ụgbọ okporo ígwè.
Paris-Nord bụ ọdụ ụgbọ oloko maka ịga Northern France na ebe ndị mba ọzọ na-aga, ọmụmaatụ, Germany, London, na Amsterdam. N'ihi ya, traingbọ okporo ígwè a na-arụsi ọrụ ike ga-enye gị ihe niile dị mkpa maka njem gị na ezumike na France. Enwere ụlọ ahịa, ebe nleta banyere njem nleta, kọfị ụlọ ahịa, na igbe mkpọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ inyocha Paris na -enwe obi iru ala ruo awa ole na ole tupu ụgbọ oloko gị agawa.
2. Ọdụ ọdụ Central nke Hamburg, Germany
Karịrị 500,000 ndị njem na-agafe na Hamburg Hbf (Hbf bụ ụzọ mkpirisi nye Hauptbahnhof nke na-atụgharị gaa na Central ọdụ) ọdụ ụgbọ oloko na Germany. N'ihi ya, Ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko nke abụọ na Europe.
E wuru ebe ụgbọ oloko dị 4 afọ na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ Heinrich Reinhardt na Georg Subenguth haziri ya. Emeghewo ọdụ ụgbọ oloko ahụ 1906 na n’ime 1991 ama agbakwunyere ebe a na-ere ihe na akwa mmiri nke ugwu, ebe enwere ulo oriri, kiosks, onye na-ere ọgwụ, na ebe ije ozi.
Ọ bụrụ n’ị na-eme atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem ka Germany, ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu oge gboo. Ya mere, mgbe ị na-azụ ahịa maka ihe ncheta nke ikpeazụ, njem dị mkpa, were kwa ata aru rie, a na-anabata gị nke ukwuu ịnụ ma nụ ụtọ Oge anọ nke Vivaldi.
3. Urzọ ụgbọ oloko Zurich HB Central, Switzerland
Nnukwu ọdụ ụgbọ oloko na Switzerland dị na Zurich. Ndị Zurich HB (HB dị ka Hbf ọ pụtara Hauptbahnhof = Central Station) ọdụ ụgbọ oloko bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị adị na Europe. Swissgbọ okporo ígwè Switzerland na-arụsi ọrụ ike na-ejikọ Switzerland na obodo dị na mba ahụ na mba ndị agbata obi. Enwere 13 nyiwe na 2,915 ụgbọ oloko na -aga Germany, Italy, France, na Austria kwa ụbọchị. Ya mere, ọdụ ụgbọ oloko Zurich bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko kacha eme n'ụwa.
Ihe ọzọ na-eme ka ụgbọ oloko a bụrụ ihe kachasịnụ na Europe bụ na enwere ọgba aghara n'ezie & ndụ egwu n'ime ọdụ ụgbọ. Dị ka ọmụmaatụ, dabere na oge njem gị, ị nwere ike na-anụ ụtọ ahịa Krismas and street parades.
Traingbọ okporo ígwè Zurich dị na Old Town nke Zurich. The Osimiri Sihl na-agafe ọdụ, nke a pụtara na enwere ụzọ okporo ụzọ dị n'okpuru na n'okpuru ya.
Ọzọkwa, ọdụ ụgbọ oloko Zurich na-ejikọ Switzerland na France, Germany, Italy, Czech Republic, na Austria.
N'otu aka ahụ maka ụgbọ oloko ndị ọzọ nke mba dị na ndepụta anyị, enwere ụlọ ọrụ mgbanwe ego, ọfịs tiketi, nchekwa igbe, njegharị ozi banyere njem, na Wi-Fi ịntanetị na ọdụ ụgbọ oloko Zurich. Ya mere, ma ọ bụrụ na i chefuola ịkwakọoro ihe maka gị ezumike na Switzerland, enweghị nchekasị n'ihi na n'ọdụ ụgbọ oloko ị nwere ike ịchọta ihe niile.
Stationgbọ okporo ígwè Rome nwere oke anyị 5 traingbọ okporo ụgbọ ala kachasị dị na Europe na - enweghị aha n'ihi ọnụ ọgụgụ ndị njem ọ na - arụ kwa afọ. Ruo 150 nde ndị njem na-abịa ma na-apụ ọdụ ụgbọ oloko na-arụ ọrụ kwa afọ.
Railgbọ okporo ígwè Rome na-ejikọ Rome Termini na obodo ndị ọzọ dị na Italy site na Trenitalia. Na mgbakwunye, ọdụ ụgbọ oloko na-ejikọ Italytali na obodo ndị agbata obi site na 29 nyiwe. Ọmụmaatụ, site na Rome Termini, you nwere ike ịga Geneva na Switzerland, Munich na Germany, na Vienna na Austria.
Trainlọ ọdụ ụgbọ oloko Rome nwere ihe ọ bụla onye njem nwere ike ịchọrọ iji mee njem na Europe ma ọ bụ Italytali. Ya mere, n'ọnụ ụzọ mbata, will ga-ahụ ụlọ ọrụ mgbanwe ego, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọrụ tagzi, na ihe mkpuchi. Emere ihe nile ma hazie iji mee ka njem gị ghari ije dika o kwere omume.
5. Ọdụ ụgbọ oloko nke Munich Hauptbahnhof, Germany
Taa enwere 32 nyiwe n’otu n’ime ọdụ ụgbọ oloko kacha dị na Europe. Na mgbakwunye, enwere InterCity na ọrụ ụgbọ oloko EuroCity ruo ọtụtụ ndị Germany, na Italy, France, Switzerland, na Austria. Site na Munchen Hauptbahnhof ọdụ ụgbọ oloko ị nwere ike ịga Berlin, Frankfurt, Vienna na Germany ma ọ bụ buru ụgbọ oloko gaa Venice na Rome na Italytali, Paris, na Zurich.
Around 127 nde ndị njem na-aga ọdụ ụgbọ oloko na Munich kwa afọ. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
N'otu aka ahụ n’ọdụ ụgbọ oloko ndị ọzọ akpọtụrụ aha n’elu, ọdụ ụgbọ oloko Munich na-enye ọtụtụ ndị njem na ọrụ maka ha. Dị ka ọmụmaatụ, can nwere ike ịchọta ụlọ ahịa nri, ụlọ ahịa onyinye na ụmụaka & ebe ngosiputa ihe ntorobịa n’ọdụ ụgbọ oloko.
N'èzí ọdụ ọdụ, will ga - ahụ U-Bahn n'okpuruala metro, ọrụ tagzi, na okporo ụzọ tram ga-ebuga gị ebe ọ bụla na Munich.
Ma ị na-achọ ụgbọ oloko mpaghara ma ọ bụ nke ụwa iji gafee Europe, ịtụ treneti ụgbọ oloko ya na Save A Train. Anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta nhọrọ tiketi kacha mma dị na ọnụahịa kachasị mma.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top 5 Ọnọdụ ụgbọ oloko kachasị njem na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/busiest-train-stations-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)